Airport Shuttle yeZurich neBasel - Yakasununguka uye yakasununguka
Svika zvakanaka uye nenguva - ne Premium Transfer Service yako
Uri kuronga kufamba mauri kana zvebhizimisi uye unoda here kuva nechokwadi rwendo rwakafambisa nemhepo inovimbika yekuvhara ndege usati waenda?
Mutyairi wedu achakutorera nemumwe wemhando dzedu dzakakwirira, dzakachengetedzwa zveGermany kubva kumusha, kubva kuhofisi kana pasuo rekunze. Zvechokwadi tichakubatsira nemutoro. Zvechokwadi, iyo ndege yako inofanira kusvika nguva pfupi, hatingakuregi iwe pasi asi tarisira kuti iwe uuye.
Svika wakasununguka uye wakasununguka paunenge uchienda
Vakawanda vevashambadzi vedu vanoshandisa nzvimbo yekuendesa ndege vari pakati peZurich Airport neEuro Airport Basel, sekutungamirirwa kwakananga chekutya hakusi kumhanya pakati pezvisungo zviviri. Kuti uchengetedze rwendo rwusinganzwisisiki rwebhazi kana kutengesa tekisi yakawandisa, sarudzo yekuvhara ndege yedu yepamusoro isarudzo yakarurama. Nzvimbo yedu muBasel mumuganhu wepakati nepakati pakati peFrance, Switzerland neGermany, isu tiriwo shamwari yakarurama kwauri kana iwe uchida mumakumbo edu oga mumakiromita 70 kure Freiburg kana kuenda kuStuttgart kana Munich.
Airport Shuttle Zurich neBasel - Teri: + 41 78 861 35 50
Nguva dzose yakarurama sedan pakutanga
Uri kufamba semunhu kune musangano unokosha webhizimisi here? Ipapo iwe unogona kutarisira runyararo rwakanyarara, unovimbika pa-nguva kusvika uye, hongu, yedu 100% kungwara panguva yekutengesa foni yebhizimisi. Semhuri kana boka iwe une nzvimbo yakakura yemumousine yaunogona, iyo iwe unogona kunakidzwa nekufamba zvakanaka neyo ndege yedu yepamusoro neSwitzerland yedu yakaisvonaka. Mukuwedzera kune kuchengeteka uye nguva, vatyairi vedu vanoda kuziva kuti rwendo rwenyu rwunofadza sezvinogona.
Ndapota tisiyei ruzivo nerwendo rwenyu rwekufamba mune yedu udza mashokoTichakurukura newe nokukurumidza sezvinobvira kuti ukurukure mashoko acho. Iwe unogona kusvika kwatiri nefoni pa + 41 78 861 35 50
Akaiswa mu: muBasel nhandare yendege Shuttle Limousine basa Zuerich
taxi.flughafen January 23, 2017 January 23, 2017 Uncategorized Hapana mhinduro
← Chifambiso chekufambisa ndege kuBasel - kufamba zvakanaka muSwitzerland
360 ° Kutumira basa kune hoteli vaenzi muBasel →